Toyota Allion 2009 (#671328) ကို Chanmyathazi မြို့နယ်တွင... | CarsDB
Lot Number: #671328
Ko Than Han Soe
***** Carsdb တွင်ကြော်ငြာထားသောကားဟု ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။***** Good condition-
သက်​တမ်း - 2019 (12) လ
1.8 (2wd) Push Start . AirCon Digital. Original TV and Back Cam . ရှေ့မီး HID ..
Kilo 90000 ကျော် . Smart Key
အတိုက်အခိုက်မရှိ ကားအရမ်းသန့်​၊ အလွန်​​ကောင်း.
​ဈေးနှုန်း - 290သိန်း
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Ko Than Han Soe မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Allion 2009 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။